Dalbashada tacliin sare
Guddiga Tacliinta Sare ee Swedish [Universitets- och högskolerådet](UHR) iyadoo ay kaashanayaan jaamacaddaha Swedish iyo kulliyada jaamacadda ayaa mas'uul ka ah oggolaanshaha qaadashada koorsooyinka iyo barnaamijka. Ardayda waxay jaamaddaha Swedish iyo kulliyaddaha jaamacaddaha waxay ka codsan karaan boggaga Antagning.se (koorsooyinka iyo barnaamijyada Swedish la isku barro) iyo Universityadmissions.se (koorsooyinka iyo barnaamijyada Ingiriiska la isku barro).
Haddii aqoonsiga aad ilaalisay, oo aadan shaacin faahfaahinta shaqsi ama ay jiraan sababo kale internetka kama buuxin kartid, UHR ayaad kala xiriiri kartaa wixii caawinaad ah. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa studera.nu iyo Antagning.se.
Macluumaad ku saabsan socodsiinta arjiga, shuruuddaha xaq u yeelashada iyo dalabyada socodsiinta waxaa laga heli karaa Antagning.se af (Swedish) ah ama Universityadmissions.se af (Ingiirska). Halkaas, waxaad ka baari kartaa koorsooyin iyo barnaamijyo, samayso koonto isticmaale, arjigaaga oggolaanshaha soo gudbi, oo natiijooyinkaaga oggolaanshaha soo gudbi. Fadlan waxaad oggaataa in Universityadmissions.se yahay bog loogu talagalay inuu buuxiyo baahida ardayda caalamiga; hase-yeeshee, waxaad heli kartaa macluumaad oggolaansho ee la xiriira oo ku qoran Ingiriiska iyo buug ku qoran koorsooyinka iyo barnaamijyada lagu bixiyo luqadda Ingiriiska oo bogga internetka ku qoran.
Sannadka arjiga laba samister ayaa loo qaybiyaa. Samisterka dayrta wuxuu bilawdaa bisha Agoosto/Seteember oo wuxuu dhammaadaa bartamaha bisha Janaayo. Samisterka xiling gu'a wuxuu bilawdaa bartamaha bisha Janaayo oo wuxuu dhammaadaa bisha Juun. Waqtiga kama dambayska arjiga waa:
Ardayda caalamiga ah koorsooyinka iyo barnaamijyada afka Ingiirska lagu bixiyo (dhammaan ardayda oo dhan ayaa dalban kara haddii ay doonayaan), Janaayo 15 ee samisterka xiliga dayrta iyo Agoosto 15 ee xiling gu'a
Dadka Sweden degan ama wadamada EU/EES ee koorsooyinka iyo barnaamijyada laga bixiyo afka Swedish ka iyo luqadda Ingiriiska (fadlan ogsoonow in koorsooyin qaar ee la bixiyo horraanta qeybta hore aan la bixin waqtigan), Abriil 15 ee xiliga dayrta iyo Oktoobar 15 ee xiling gu'a.
Haddii aad jeceshahay in aad dhigata inta lagu jiro xiliga xagaaga, jaamacaddaha waxay bixiyaan koorsooyinka gaa-gaaban oo waqtiyo kala duwan ah. Mudada arjiga ee koorsooyinka xiliga xagaaga waa Maarso 15.